“Waxaan doonayaa inaan qeyb ka noqdo Chelsea-da cusub” – Timo Werner – Gool FM
(London) 29 Luulyo 2020. Weeraryahanka dhawaan galka ah kooxda Chelsea ee Timo Werner ayaa cadeeyay inuu doonayo inuu xubin muhiim ah ka noqdo naadigiisa cusub ee reer London.
Chelsea ayaa 24 jirkan kala soo saxiixatay xagaagan Kooxda reer Germany ee RB Leipzig adduun dhan 45 milyan oo ginni.
Sida laga soo xigtay shabakada “Sky Sports” Timo Werner ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waan ogahay ciyaartoydii ku guuleystay Champions League waqtiyadii la soo dhaafay kuwaasoo ay qeyb ka ahaayeen Didier Drogba, Frank Lampard iyo Petr Čech, waxay ii tahay riyo qurux badan aniga ahaan”.
“Ma doonayo inaan noqdo sidooda oo kale, laakiin Waxaan doonayaa inaan qeyb ka noqdo Chelsea-da cusub”.
“Sidaas darteed waxaan doonayaa inaan ciyaaro oo aan inta awoodeyda ah aan sameeyo, si ay kooxda wax walba ugu guuleysato”.
Waxaa xusid mudan in Timo Werner uu xilli ciyaareedkan dhaliyay 34 gool, isla markaana uu caawiyay 13 gool kale, 45 kulan oo uu ka muuqday kooxdiisii hore ee RB Leipzig, ka hor inta uusan ku biirin Chelsea.
Daafacii ugu adkaa uu ka hor yimid, kulankii ugu muhiimsanaa ee xirfadiisa, abaal-marinta Ballon d'Or & dhowr arrimood uu ka hadlay Benzema